हिमालय खबर | रत्ननगरलाई नमूना नगरपालिका बनाउने मेरो अठोट छ : गोविन्द गौतम
Wednesday, 20 October, 2021 | ३ कार्तिक २०७८, बुधबार
रत्ननगरलाई नमूना नगरपालिका बनाउने मेरो अठोट छ : गोविन्द गौतम
केशव भट्टराई / हिमालयखवर संवाददाता- ,
प्रकाशित ३० चैत्र २०७३, बुधबार | 2017-04-12 12:46:26
गोविन्द गौतम, रत्ननगरका कांग्रेसका हस्ती मानिन्छन् । कानुनमा स्नातक गरेका रत्ननगर–१२, निपनीका यी ४८ वर्षे राजनीतिज्ञले ०७४ वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि रत्ननगर नगरपालिकाको मेयरमा आकांक्षा देखाएका छन् । विभिन्न संघसंस्था र उपभोक्ता समितिमा रहेर नगर विकासका विभिन्न आयामसँग जोडिएका यी नेताको राजनीतिक यात्रा २०४२ सालको सत्याग्रहदेखि सुरू भएको हो । नेविसंघ रत्ननगरबाट सहभागी हुँदा प्रहरीको पक्राउमा परेका उनी ०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेपाल ल क्याम्पसको प्राङ्गढबाटै पक्राउ परी एकसाता बग्गीखाना जेल परेका थिए । २०५२ सालदेखि नेविसंघको राजनीति हुँदै तरुण दलमा आवद्ध उनी रत्ननगरका प्रथम निर्वाचित नगरसभापति बने । त्यसयता पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै अघि बढे । तरुणको दोस्रो महाधिवेशनमा व्यवस्थापन समिति, तेस्रो महाधिवेशनमा केन्द्रीय प्रतिनिधि, कांग्रेसको क्षेत्र नं २ को सचिव, तरुणको जिल्ला सहसचिव रहेर काम गरे ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका प्रदर्शन गरेका उनलाई निवारण नजरबन्दीको पुर्जीसहित पक्राउ गरिएको थियो । पटकपटक आन्दोलनमा सहभागी भई जेल गरेका उनी पार्टीमा अविचलित रुपमा काम गर्दै आएका छन् । पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा संयोजक भई काम गरेका उनीसँग संघीयता, शासकीय स्वरुप र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाटसम्बन्धी विभिन्न जिल्लामा प्रशिक्षण दिएको अनुभव छ । कानुनमा विशेष दख्खल राख्ने भएकाले उनले संविधान सुझाव संकलनमा पनि चितवनबाट सक्रियता देखाएका थिए । दर्जनौँ सामाजिक संघसंस्थामा रहेर सामाजिक कर्म गर्दै आएका उनी कांग्रेस नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाबाट समेत प्रंशसा–पत्रद्वारा सम्मानित भएका थिए । रत्ननगरमा कांग्रेसबाट तीन पुस्ताका नेताले मेयरका लागि आकांक्षा देखाएका छन् । तीमध्ये आफू कुनै पनि मानेमा कमजोर नरहेको जिकिर गर्ने उनी पार्टीले आफ्नो योग्यताको मूल्यांकन गरेर टिकट दिनेमा ढुक्क छन् । प्रस्तुत छ, जुझारु, कर्तव्यनिष्ट र निष्ठाको राजनीति गर्ने गौतमसँग हिमालय खबरका लागि केशव भट्टराईले गरेको कुराकानी–
१) रत्ननगर नगरपालिकाको मेयरमा तपाइँको आकांक्षा किन ?
–रत्ननगरले एउटा आमूल परिवर्तन खोजेको छ । समृद्ध सहरका रुपमा रुपान्तरिक हुन खोजेको छ । म यसका लागि जनउत्तरदायी र कर्तव्यनिष्ठ भएर कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्छु । नगरलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउँदै आधुनिक सहरमा रुपान्तरण गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यही भएर रत्ननगर नगरपालिकालाई कुशल नेतृत्व प्रदान गर्न मेयरको उम्मेदवारीका लागि आकांक्षा राखेको हुँ ।
२) नगर विकासका लागि तपाइँसँग के कस्ता एजेन्डा छन् ?
–सर्वप्रथम त रत्ननगरभित्र देखिएका अधिकतम समस्याहरुलाई समाधान गर्न दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । यसभित्र यहाँको जनप्रशासनमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न र रुपान्तरणका लागि आर्थिक विकासका थुप्रै संभावनाहरुको आवश्यकता पर्दछ । यहाँको पर्यटन, कृषि, उद्योग र निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई आत्मबल बढाइ शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था गर्दै समृद्ध नगरपालिकामा रुपान्तरण गर्ने एजेन्डा मसँग छ । अर्को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मानवअधिकार, बालमैत्री नगर स्थापनाका लागि यहाँका संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गर्नेछु । यहाँको स्रोत र साधनहरुलाई सामाजिकीकरण गर्दै गरिब र धनीबीचको खाडल कम गर्न मेरो पूरै पर्यत्न रहनेछ । सबै क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउँदै इच्छाशक्तिको विकास गरेर समृद्ध नगर बनाउने दृढ संकल्प मेरो छ ।
३) नगरका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउने सोच छ ?
–रत्ननगर विशेषता बोकेको नगर हो । तर, यहाँका जनताका जीवनस्तरका विविध चुनौती पनि छन् । यहाँ नगरका आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, भूमिहीन र पिछडावर्गको अस्तित्वलाई संरक्षण गर्दै उनीहरुलाई आफ्नै खुट्टामा धानिन सक्ने (आत्मनिर्भर) अर्थतन्त्रको पहिचान गरी उनीहरुको विविध सौन्दर्यलाई संरक्षण गर्न आवश्यक र नीतिगत कार्यक्रम ल्याउने सोच छ ।
४) नगरलाई कस्तो बनाउने गुरूयोजना छ तपाइँसँग ?
–रत्ननगर पछिल्लो समय टुरिजम हबका रुपमा विकास हुँदै गएको छ । यहाँको पर्यटन क्षेत्र विश्वकै परिचित छ । जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै अनुकूल वातावरण निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने योजना छ । करको दायरालाई वैज्ञानिक बनाउँदै आवश्यक नीति तय गरेर प्रशासनलाई जनमुखी, सेवालाई सजिलो, दलीय सद्भाव राख्र्दै पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने योजना छ । जनताको जीवनशैली र अधिकारलाई हेरेर उनीहरुलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिई दक्ष जनशक्ति, क्षमता र कार्यकुशलताका आधारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना छ । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याउने र उनीहरुलाई तालिम, प्रशिक्षण दिएर स्वरोजगार बनाउने योजना छ ।
यस्तै, नगरको समृद्धि र विकासको संभावनाहरु पहिल्याएर विज्ञहरुसँग छलफल र परामर्श गरी वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, प्रतिफल वृद्धि गर्ने योजना छन् । विकास, निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिँदै रत्ननगरलाई नमूना नगरपालिका बनाउने मेरो अठोट छ । त्यसका लागि असल नेतृत्व चाहिन्छ, त्यो क्षमता मसँग छ ।
५) करिब दुई दर्जन उम्मेदवारको भीडमा तपाईंलाई नै किन चयन गर्ने ?
–मेरो राजनीतिक योगदान अन्य उम्मेदवारभन्दा कम छैन । र, योग्यता र क्षमताका हिसावले पनि म योग्य छु । राजनीतिक निरन्तरता, क्रियाशीलता, अविचलित रुपमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र लोकतन्त्रको प्रतिफल जनसमक्ष ल्याउने संवाहकका रुपमा मैले आफूलाई अब्बल दर्जाको सोचेको छु । मेरो निजी स्वार्थ त्यागेर जनताको सेवक हुँ मालिक होइन भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्ने मेरो विकल्प मैले देखेको छैन ।
६) यति धेरै आकांक्षी बढ्नुको खास कारणचाहिँ के देख्नुहुन्छ ?
–तपाईलाई थाहै छ, २० वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । लामो समय चुनाव नहुँदा आकांक्षी बढ्नु स्वभाविक हो । कांग्रेस आफैँमा ठूलो पार्टी पनि भएकाले तीन पुस्ताको आकांक्षा जोडिनु स्वभाविकै हो । यसका योग्यता र नयाँ सोच र भिजन भएको नेतृत्व अबको कांग्रेसमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
७) कांग्रेसका विभिन्न पक्षधरले आकांक्षा देखाएका छन्, तपाईंको उम्मेदवारी पनि कसैको ‘व्याक सपोर्ट’का लागि हो कि ?
–त्यो बिल्कुलै होइन । पार्टीमा त्याग, समर्पण गरेको अरुका लागि होइन । म आफैँ योग्य, सक्षम र इच्छाशक्ति बोकेको उम्मेदवारले कसैको व्याक सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । निरन्तर रुपमा अविचलित भई पार्टीमा योगदान पु¥याएको व्यक्ति हुँ । मलाई पूर्ण विश्वास छ, पार्टीले मलाई टिकट दिन्छ र नगरवासीले पनि मलाई चुनावमा विजयी बनाउने छन् ।
८) प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले पनि रणनीति बनाउलान्, चुनाव जित्छु नै भन्ने आधार के देख्नु भएको छ ?
–रत्ननगरको भूगोलबारे मलाई राम्रोसँग ज्ञान छ । यहाँका जनताको डोर टू डोर पुगेको छु र यहाँको समस्याबारे म राम्रोसँग जानकारी राख्छु । मेरो राजनीतिबाहेक अन्य कुनै पेसा, व्यवसाय छैन । योग्य र सक्षम नेतृत्व नगरविकासका लागि समर्पित गर्न सक्छु । नगरमा कांग्रेसको जनाधार पनि बलियो छ । यो जनाधार बनाउनमा मेरो विगतको योगदान छ । म लोकतान्त्रिक पद्दति र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने मान्छे हुँँ । तर, मेरो तीव्र प्रतिस्पर्धा कसैसँग छैन ।
यो पनि पढ्नु होला>> आन्तरिक राजनीतिको गोटी बनाइदैछ एमसिसीलाई । जनताबीच एक आपसमा लडाउने र भीडाउने हतियार बनाइदैछ एमसिसीलाई -रामचन्द्र भट्ट
केशव भट्टराई / हिमालयखवर संवाददाता- -
दसैँको टीका लगाउने र लगाइदिने कता फर्केर बस्ने ?
विजया दशमीको टीकाको उत्तम साइत बिहान १० : ०२ बजे
जापानमा आम निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन
यस वर्ष खुल्यो कालभैरव मन्दिर, भक्तजनको घुइँचो
उत्तर कोरियाका कमजोर बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भोकमरीको जोखिम
डब्ल्युएचओद्वारा कोरोनाभाइरसको उत्पत्ति स्थान पत्ता लगाउन नयाँ कार्यदल गठन
नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो पटक फाइनलमा
१०३ घरपरिवारलाई एउटै मात्र धारो !
ठडिँदै माछापुच्छ्रेको ‘सिँहदरबार’
नवरात्रको नवौँ दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना
अमेरिकामा उदाउँदै नेपाली गोल्डस्टार जुत्ता - ( विदुषी राणा भिडियो अन्तर्वाता )
हिमालयखवर संवाददाता २ कार्तिक २०७८, मंगलवार
अमेरिका- नेपालमा बनेको चर्चित गोल्डस्टार ब्राण्डका जुत्ताको अमेरिकामा पनि विक्री वितरण शुरु गरिएको छ । गत साता गोल्टस्टार ब्राण्डका जुत्ताका उत्पादक किरण सुजले अमेरिकाको न्यूयोर्क र टेक्सस डलासमा विक ...
अहिलेको संविधान नेपालले धान्न सक्दैन : रुक्माङ्गद कटवाल (भिडियो अन्तरर्वार्ता)
हिमालय खबर १२ आश्विन २०७८, मंगलवार
अमेरिका । रुक्माङगद् कटवाल गैरराजनीतिक व्यक्तित्व भए पनि उनको संयोग राजनीतिसँग सधैँ जोडिएको छ । संयोगहरुले कटवाल नेपाली सेना र राजनीतिभित्र चर्चित व्यक्ति बन्न पुगे । अझै पनि आफ्नो कुरा सेनाकै ...
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोख्रेल र नेपाल अमेरिका पत्रकार संघका अध्यक्ष विकासराज न्यौपाने बिचको भलाकुसारी
हिमालयखवर संवाददाता २४ श्रावण २०७८, आईतवार
अमेरिकामा तारे होटल सञ्चालनमा जमेका जगन्नाथ शर्मा
हिमालय खबर २३ श्रावण २०७८, शनिबार
भर्जिनिया (अमेरिका) । अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसी जाने अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टनजिक वइन्डम चेनअन्तर्गत रहेको विनगेट तारे होटलमा कुनै फुर्तिलो कर्मचारी देख्नुभयो भने शर्माजी भनेर बोलाए हुन्छ । ...
समाज , २ कार्तिक २०७८, मंगलवार
समाज , १ कार्तिक २०७८, सोमबार
पत्रकारितामै पनि ठूलो समस्या छ : पत्रकार प्रधान (भिडियो सहित)
समाज , ३१ आश्विन २०७८, आईतवार
एनआरएनए कार्यसमितिको अवधि ६ महिना वढ्यो
समाज , २९ आश्विन २०७८, शुक्रबार
अमेरिकामा टीकाको साइत
दशैं मनाउन जाने यता पनि उता पनि
BUDHANILKANTHA, KATHMANDU, NEPAL